GMAZ Inoti VaMnangagwa Vanoziva nezveNyaya yeMari Inofungidzirwa neParamende Kuti Haina Kufambiswa Zvakanaka
Sangano reGrain Millers Association kana kuti GMAZ nhasi razivisa paramende kuti rakabatsira Grain Marketing Board nemari yekugadzirisa matura ayo mushure mekunge rakumbirwa kuita izvi nemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, panguva yavaive mutevevedzeri wemutungamiriri wenyika zvakare vari sachigaro wedare remakurukota ainona nezvekuti nyika yawana chikafu chakakwana kana kuti Food Security pachirungu.
Avo ndisachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekurima, VaJustice Mayor Wadyajena, vachikandirana makobvu nematete nasachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe, VaTafadzwa Musarara.
VaMusarara, nhasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvekurima, kuti vakapa kambani yehurumende yeGMB mari yekugadziria matura ayo muna 2016 mushure mekunge vakumbirwa kuita izvi naVaMnangagwa.
Vaenderera mberi vakati vakaudzwa naVaMnangagwa kuti chirongwa cheCommand Agriculture chaizoburitswa goho rakanaka nekudaro vaida kuti GMB igadzisirise mataura ayo uye vaida kuti sangano ravo ribatsire panyaya iyi.
Vati mushure mekutaura naVaMnangagwa, vakazoita mumwe musangano nevaive gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, apo vakazoita chibvumira chekubatsira GMB nemamiriyoni mapfumbamwe emadhora ekuAmerica.
Vati vakabvumirana kuti hurumende yaizobhadhara mari iyi nekutengesera sangano ravo chibage nemutengo uri pasi izvo zvinove zvakazoitika.
Kunyange hazvo VaMusarara vaburitsa magwaro avati anoratidza kuti mari iyi yakashandiswa kubva kubhanga ravo reMetbank pamwe nevanoongorora mari dzeGMAZ kana kuti auditors veBaker Tilly, GMB yaramba kuti yakawana mari kubva kuGMAZ.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muGMB, VaClemence Guta, vati GMB yakagadzirisa matura ayo nemari yaitengwa chibage nenhengo dzeGMAZ.
Panyaya yekuti bazi rezvemari raiziva nezvekubatsira kwakaitwa GMB neGMAZ, VaWadyajena vati paramende yakanyorera kugurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube avo vakataura kuti hapana humbowo rweizvi mubazi ravo uye havana zvavanoziva nezvenyaya iyi.
VaWadyajena vati nekuda kwaizvozvo VaNcube vakati hapana humbowo hwavaikwanisa kupa komiti yavo.
Komiti yaVaWadyajena yati iri kuenderera mberi nekuongorora nyaya iyi uye inoda kuti GMAZ iendese kuparamende magwaro aya kaita chibvumirano chekubatsira GMB nebazi rezvemari nezvimwe zvingabatsire komiti iyi panyaya iyi.
Mune imwewo nyaya, komiti yaVaWadyajena yange ichida kuziva kuti GMAZ yakashandisa sei mamiriyoni makumi maviri nemanomwe emadhora ekuAmerica ayakapiwa neReserve Bank of Zimbabwe.
VaMusarara vati mari iyi yakashandiswa kutenga gorosi kunze kwenyika. Vati mari iyi haina kupihwa kuGMAZ asi kuti yakapihwa kukambani yeHolbud iyo inove kambani yaiunza gorozi munyika.
Asi VaWadyajena vati komiti yavo haina kugutsikana nezvetaurwa naVaMusarara uye vati kuferefetwa kwakaita neparamende kumakmbani akaita seZimbabwe Revenue Authority, kwaratidza kuti GMAZ haina kana kumbotenga gorosi kubva kunze kwenyika asi kuti izvi zvakatoitwa neimwewo kambani inonzi Drostky.
VaMusarara vabvuma kuti Drostky ikambani yavo uye VaWadyajena vati komiti yavo iri kuenderera mberi nekuongororo kuti sei Droskty iri iyo yaitenga gorosi kubva kunze kwenyika ichishandisa mari yainge yapihwa GMAZ.
Mangwana komiti yaVaWadyajena iri kutarisirwa kushanyira makambani aVaMusarara anoti Drostky neAlpha Grain apo iri kuenderera mberi nekuongororo nyaya iyi.
Nyaya iyi yaifanira kunge yakaitwa gore rapfuura asi VaMusarara vakanyorera kumutauriri weparamende VaJacob Mudenda vachiti vaida kuti inzikwe nekomiti inoona nezvekushandisa kwemari yehurumende sezvo vaiona VaWadyajena semunhu aive nedivi raakarerekera.
Asi hutungamiriri weparamende hwakagara pasi hukaona zvakakodzera kuti VaMusarara vamire pamberi pekomiti yaVaWadyajena ndokuvatumira masamanisi azovaunza kudare nhasi.
VaWadyajena varatidzawo kusafara kuti VaMusarara pamwe nevashandi veGMAZ vaitaura kumapepanhau nezveongororo iyi uye vati kana zvikaitika zvekare vachatongwa nenyaya yekuzvidza dare.
VaMusarara avo vauya negweta ravo varambidzwa kushandisa gweta ravo uyewo mutauriri wesangano reGMAZ, VaGarikai Chaunza, avo vange vatora mhiko yekuti vape humbowo vadzingwa mudare vachinzi vange vave kukanganisa komiti iyi.
VaChaunza vayambirwawo kuti vacharangwa kana vakaramba vachitaura pamusoro penyaya iyi.
Ongororo iyi iri kuenderera mberi uye VaMusarara pamwe nedzimwe nhengo dzeGMAZ vanzi vachakokwa zvakare kudare.